WestJet izao dia mila vaksiny COVID-19 feno ho an'ny mpiasa rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » WestJet izao dia mila vaksiny COVID-19 feno ho an'ny mpiasa rehetra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo mpiasa izay tsy manamarina ny maha vaksiny azy amin'ny 24 septambra na mahazo ny vaksiny feno amin'ny 30 Oktobra 2021, dia hiatrika fialan-tsasatra tsy misy karama na famaranana ny asa.
WestJet dia nanambara ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao ho an'ny mpiasa rehetra.
Ny satan'ny vaksiny feno dia takiana ihany koa ho an'ny mpiasa ho avy rehetra.
Ny politika politika vaovao momba ny vaksiny dia hanomboka amin'ny 30 Oktobra 2021.
Nanambara ny Vondrona WestJet androany fa manomboka amin'ny 30 Oktobra 2021, ny mpiasa ao amin'ny WestJet Group dia takiana hanaovana vaksiny feno amin'ny COVID-19. Ho fanampin'izany, ny satan'ny vaksiny feno dia ho takiana amin'ny asa ho an'ny mpiasa ho avy rehetra karamain'ny WestJet Group.
"Ny fiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahininay sy ny mpiasa no mijanona ho laharam-pahamehana indrindra ho anay ary ny fanaovana vaksiny no fiarovana tsara indrindra anay," hoy i Mark Porter, WestJet Filoha lefitry ny vahoaka mpanatanteraka. "Ny sidina dia iray amin'ireo indostria mafy indrindra ary mino izahay fa ny mitaky vaksiny ho an'ny mpiasa WestJet rehetra no zavatra mety hatao ary miantoka ny tontolon'ny fivezivezena sy ny asa azo antoka indrindra ho an'ny olona rehetra ao amin'ny tontolon'ny WestJet."
Ny vondrona WestJet dia hanombatombana sy handray ireo mpiasa izay tsy afaka vita vaksiny manohitra ny COVID-19 na amin'ny alàlan'ny fanavotana amin'ny hafa. Ireo mpiasa izay tsy manamarina ny maha vaksiny azy amin'ny 24 septambra na mahazo ny vaksiny feno amin'ny 30 Oktobra 2021, dia hiatrika fialan-tsasatra tsy misy karama na famaranana ny asa. Tafiditra ao anatin'ny baikon'ny vaksininy ny zotram-pitaterana an'habakabaka fa tsy hanome fitsapana ho solon'ny vaksiny.
Hoy hatrany i Porter, "Ny vondrona WestJet dia manolo-tena amin'ny fananganana matanjaka kokoa hatrany hiantohana ny indostrian'ny seranam-piaramanidina any Canada. Ny fitakiana ny mpiasa rehetra hatao vaksiny manohitra ny COVID-19 dia zava-dehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia manerana an'i Canada. ”
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, ny vondrona orinasa WestJet dia nanangana rafitra fiarovana ho fiarovana mba ahafahan'ny Kanadiana manohy mivezivezy am-pilaminana sy amin'ny andraikitra amin'ny alàlan'ny fampanantenan'ny fiaramanidina ambonin'izy rehetra. Nandritra io fotoana io, WestJet dia nitazona ny toerany ho iray amin'ireo zotram-piaramanidina 10 ambony indrindra any Amerika Avaratra araka ny nantsoin'i Cirium.
John Sneddon hoy:
September 9, 2021 ao amin'ny 05: 11
Orinasa ratsy ianao, manantena aho fa tsy hahomby ilay maodely fatra-pitia anao